Sharciga cusub ee Qaxootiga Imaanaya Yurub oo la soo bandhigay - Horseed Media • Somali News
September 23, 2020World News
Sharciga cusub ee Qaxootiga Imaanaya Yurub oo la soo bandhigay
Ujeedada ugu weyn ee siyaasadda sharciga cusub ee Midowga Yurub ee soogalootiga lagula dhaqmaayo ayaa ah, in hoos loo dhigo dadka soo gelaya EU-da halka kor loo qaadayo dadka dib loogu celinaayo dalkoodi.
Wakiilka arrimaha socdaalka ee Midowga Yurub Ylva Johansson oo ka mid ah dadka sida weyn ugu hawlan soo jeedinta sharciga cusub ayaa sheegtay in Midowga Yurub uu sii wadi doono qaabilaada muhaajiriinta, laakiin dib loo cusbeyneysiinayo sharciga Socdaalka.
Waxaan in badan diiradda saari doonaa dib u celinta dadka magangelyo doonka ah ayey tiri Ylva Johansson iyada oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtey in Midowga Yurub ay taageero xooggan u hayaan qaabilaada dadka magangeliyo doonka ah, laakiin ay welwel ka qabaan sidii loo kala saari lahaa kuwa xaqa u leh in ay helaan magangelyo iyo kuwa aan muteysan in ay sii joogaan Midowga Yurub.
Sharciga cusub ayaa dhigaya in kala shaandheynta magangelyo doonku ay goor hore ka dhaci doonto xuduudka ugu horeeya ee ay ka soo galeen, taas oo aan ka badneyn muddo shan maalmood ah, waxaana meesha laga saarayaa xeryihii qaxootiga ee mudada sanada ah la fadhiyi jirey sidey sheegtey Ylva Johhanson.
Si aan ugu guuleysano barnaamijka dib ucelinta, waxaan diiradda saari doonaa wax badan xiriirka aan la leenahay dalalka ay ka yimaadeen qaxootigu waa inaan ka helno heshiisyo wanaagsan oo dhanka dib u celinta
Sharciga cusub ayaa dhigaya in qaxootiga ka imaanaya dalalka aan ku jirin kuwa magangelyada la siiyo lagu qaadi doono sharciga xuduudaha oo degdeg dib loogu celinaayo dalkoodi, kiiskoodana aan la fureyn.
Ylva Johhanson ayaa sheegtey si aysan u dhicin diidmo aan laga fiirsan in ay dhisayaan hannaan lagu keydiyo xogta kaas oo loogu yeero EURODAC
EURODAC ayaa lagu keydinayaa xogta qofkasta oo yimaada xuduudka Midowga Yurub.
Sanadkii la soo dhaafay 2019, qiyaastii 140,000 oo loogu yeero muhaajiriinta aan caadiga ahayn ayaa yimid Midowga Yurub. Sannadkan 2020, tirada ayaa la filayaa inuu ka yaraado taas oo aysababtey Korona Fayrsas.
Heshiiskii Dublin waxaa lagu badalay qaab cusub
Komishanku wuxuu kaloo soo jeedinayaa in lala noqdo waxa loogu yeero heshiiskii Dublin kaas oo dhigaayey in magangelyo doonku uu ku sugnaado dalka ugu horeeya ee Midowga Yurub uu ka soo galay, oo weydiisto oggolaansha.
Ylva Johansson ayaa sheegtey in maanta ay jira fursado aad u ballaaran oo lagu dhex lumi karo nidaamka heshiiska Dublin oo laga soo muuqan karo waddan kale oo magangelyo laga dalbado.
Dabkii dhawaan ka kacay xerada qaxootiga ee Moria oo ku taal jasiirada lesbos ee dalka Giriiga, ayaa sababay in Madaxa Gudiga Yurub Ursula von der Leyen ay meesha ka saarto heshiiskii Dublin 1997, waxaana hadda EU.da u yaala sidii ay u qaybsan lahaayeen 12 kun oo qaxooti ah oo ku sugan Giriiga.
Sharciga cusub ee la soo bandhigey ayaa u baahan taageerada 27 dal ee ku jira Midowga Yurub, waxaana jira dalal dhawr ah oo ka soo horjeeda sharcigan.
Xasan Cali Kheyre Oo Lagu Soo Dhoweeyey Turkiga
Erdogan oo ku baaqay in baaritaan Maskaxda ah lagu sameeyo Macron!
Afghanistan: Ciidamada oo dilay hogaamiye ka tirsan AL-Qacida
Madaxweyne Waare Oo Gudbiyey Xubnaha Guddiga Doorashooyinka Iyo Xalinta Khilaafaadka
Ilhaan Cumar Oo Ka Hadashay Doorashada Soomaaliya 2021 – VIDEO
Ciidamada Puntland Ee PSF Oo Qabtay Doonyo Iyo Saxiimado Wadey Hub Sharci Darro Ah